Adss Cable Guy elisebenza Manufacturers kunye Suppliers | China Adss Cable Guy kokuqonda Factory
ADSS isiphelo kwabafileyo kwexesha ezisetyenziswa kwipali okanye neenqaba metal ekwakhiweni yothungelwano lokuhambisa xa besebenzisa iifoni ne fibre optic ADSS iintambo.
Jera umgca imveliso eyenziweyo okwazi ukunyenyisa wire iphela abafileyo abunjwe ngokungqinelana ukuya cable sheet data abaxhasi '. Xa amandla kwempixano liphezulu, kufuneka isicelo ADSS ukubambelela helical kunye Splice nomkhuseli ukuze akhusele ifayibha engundoqo umonakalo ngexesha tensioning. Malunga nayo, singasebenza ADSS eyenziweyo ucingo ukubambelela ngaphandle umkhuseli, xa imeko ophantsi 9 KN, kunye ప్రదాత umniki okanye ngaphandle kwayo.
All of ADSS yekiriva zethu ekupheleni abafileyo kunye izincedisi wire ukwakhiwa azivavanywanga nge intsebenziswano umbane kunye zonxibelelwano eziluncedo ukuze anelise iimfuno zabathengi bethu.